site na nhazi na 20-05-29
Nkwa 5 usoro: Nzube na ịkwụwa aka ọtọ maka azụmahịa 1.Mgbe ụlọ ọrụ anyị na-ewusi ike na nguzosi ike na njide onwe onye, ​​na-agbasosi iwu ike na nchedo ikike na ọdịmma ndị ahịa, na-arụ ọrụ dị mkpa nke ndị na-azụ ahịa, .. .
Mbugharị mbu nke ụlọ ICU nke ụlọ ọgwụ pukang dị na mpaghara ọrịa ọrịa na-efe efe na Malaysia bufere ikuku n'enweghị nsogbu.
Kuala Lumpur, Eprel 6 (AFP) - dịka nke elekere 12 nke taa, akwụkwọ akụkọ coronavirus dị na Malaysia ekwuputala ikpe 131 na ọnwụ 62, na-ebute ọnụ ọgụgụ nke ikpe ahụ enwetara na 3,793. Taa, a chụpụrụ mmadụ 236 n'ụlọ ọgwụ, na-ebute ọnụ ọgụgụ ndị gbakere na 1,241. Na mgbakwunye, a ...
Otu uche iji gbochie ma chịkwaa ọrịa ahụ — HEBEIPUKANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. nyere onyinye na ihe iji lụ ọgụ megide COVID-19
Afọ Ọhụrụ malitere na 2020, Mgbasa na mmepe nke COVID-19 na-emetụta ndụ nkịtị nke ọtụtụ ezinụlọ.Mụkọta ndị ọrụ na WuHan na ebe ndị ọzọ gafee mba ahụ na-arụ ọrụ na ihu nke igbochi na ịchịkwa ọrịa.Ime iji chebe nke ọma ahụike nke ndị mmadụ, ndị XuShui…